Yaa ku soo baxay Kursigii laga dilay Xildhibaan Aamino? | KEYDMEDIA ENGLISH
Yaa ku soo baxay Kursigii laga dilay Xildhibaan Aamino?
Kursigaan wuxuu ka mid ahaa kuraasta degaan doorashadoodu ahayd Baladweyne, arrimo amni awgood, ayaana loogu soo wareejiyay Jowhar.
JOWHAR, Soomaaliya – Maxamed Aadan Daahir ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay HOP#135 oo Baarlamaankii 10-aad ay ku fadhisay Allaha u naxariistee Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, kaasoo doorashadiisu ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe.
Amran Xuseen Isxaaq iyo Maxamed Nuur Xuseen, ayaa tartanka qeyb ka ahaa, hayeeshee, Maxamed Caanoy, ayaa wareeggii 1-aad ku guuleystay codod 50+1 ah, waxayna dadka yaqaanna sheegayaan inuu aad ugu dhow yahay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Samiira Mohamed Cabdi, oo la dhalatay Xildhibaanaddii la khaarijiyay, ayaa hore ugu soo istaagtay tartanka kursiga, halka xogo hore sheegayeen in beesha kursiga leh, ay Guudlaawe, ku wargalisay in Samiira lagu soo saaro kursigaas, hayeeshee, qorsahaas ayaa is-baddelay markii danbe.
Kursigaan wuxuu ka mid ahaa kuraasta degaan doorashadoodu ahayd Baladweyne, arrimo amni awgood, ayaana loogu soo wareejiyay Jowhar, kadib markii kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Fahad iyo Farmaajo hoggaamiyaan, culays saareen doorashada kursi, kadib khaarijintii Xildhibaan Aamino.
Dhanka kale, Wasiirkii hore ee Amniga, Maxamed Abuukar Islow, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay HOP#141 ee Baarlaanka JFS oo doorashadiisa ka qabsoontay Magaalada Jowhar, wuxuuna Islow ka mid yahay kooxda Ololaha Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre.
Dhamaadkii April, Keydmedia Online, ayaa qortay, in kursiga HOP141, uu sii xajisan karo, Maxamed Abuukar Islaw Ducaale, oo ah ganacsade si weyn loo qaddariyo, halka HOP146, uu soo qaadan doono Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, sidaas ayayna u dhacday doorashooyinka kuraastaas.